Cryptocurrencies ၏ကမ္ဘာပေါ်မှာ Flippening ဘာလဲ? - Cazoo
ပင်မစာမျက်နှာ » ပင်မစာမျက်နှာ » Cryptocurrencies ၏ကမ္ဘာပေါ်မှာ Flippening ကဘာလဲ?
Cryptocurrencies သင်ယူခြင်း - Flippening ဆိုတာဘာလဲ
tag ကို: Bitcoin, BTC, eth, ethereum, လှန်ခြင်း။, စမတ်စာချုပ်များ
ဝေါဟာရ လှန်လှောခြင်း 2017 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်စျေးကွက်အရင်းအနှီး Ethereum (ETH) Bitcoin (BTC) ထက်ကျော်လွန်သောဖြစ်နိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်, ဟူသောဝေါဟာရကိုဖော်ပြသည် အနာဂတ်အတွက်မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ယခုအချိန်တွင် ဘယ်မှာ Ethereum စျေးကွက်အရင်းအနှီးအားဖြင့်အကြီးဆုံး cryptocurrency ဖြစ်လာသည်။
cryptocurrency ၏စျေးကွက်အနိမ့်ဆုံးအား၎င်း၏လက်ရှိစျေးကွက်ဖြင့်မြှောက်ထားသော၎င်း၏လက်ရှိကမ်းလှမ်းချက်အားဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ လောလောဆယ် Bitcoin သည်စျေးကွက်အရအဆင့်တွင်ပထမနှင့်ဒုတိယနေရာတွင် Ethereum ကရပ်တည်သည်။
BTC သည်အမြဲတမ်းစျေးကွက်အရင်းအနှီးဖြင့်နံပါတ်တစ် cryptocurrency ဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏စျေးကွက်လွှမ်းမိုးမှုသည်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ ထိုကျဆင်းမှုကို ၂၀၁၇ နှစ်လယ်ပိုင်းနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်အထူးသဖြင့်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်များအတွင်း Ethereum ကိုထောက်ခံသူများစွာက Flippening ဖြစ်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။
စျေးကစားသူများအနေဖြင့်တိုးချဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်စမတ်စာချုပ်များချုပ်ဆိုနိုင်ခြင်းနှင့်တီထွင်နိုင်ခြင်းတို့သည် Ethereum အား Bitcoin အထက်ရှိသည့်အဆင့်များသို့တွန်းပို့လိမ့်မည်ဟုပြောဆိုကြသည်။
Flippening Watch ဝက်ဘ်ဆိုက် (www.flippening.watchBitcoin ကိုဆန့်ကျင်သော Ethereum ၏တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရန်ရည်ညွှန်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ယခင်ဆောင်းပါးUPDATED: သိပ်နောက်ကျမလုပ်ခင် X100 ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ဒီတိုကင်တွေကိုဘယ်လိုရှာမလဲ။